Waa Maxay Xiriirka ka dhexeeya Ronaldo iyo Dagaalyahanka MUSLIMKA ah ee baryahaan Adduunka Gil-gilay!!!???+SAWIRRO – Gool FM
Waa Maxay Xiriirka ka dhexeeya Ronaldo iyo Dagaalyahanka MUSLIMKA ah ee baryahaan Adduunka Gil-gilay!!!???+SAWIRRO
(Europe) 10 Okt 2018. Dagaalyahanka Muslimka ah ee ciyaara Ciyaaraha miisaanka culus ee UFC Khabib Nurmagomedov ayaa ku jira dabaal deg wayn kaddib markii uu dhawaan ka adkaaday midka ugu magaca dheer UFC ee Conor McGregor.
Labada dagaal yahan ayaa dagaal afka ah dhex maray ka hor kulankooda balse wiilka Muslimka ah ayaa yiri insha’alaah waa inoo Garoonka isagoona ugu dambeyn guul wayn ka gaaray.
“Qofbaa ii shegay in Ronaldo igu soo darsaday, balse waxaan mooday inay Kaftan tahay.
“Intaa kaddib waan hubiyay oo dhab ahaan ayuu iigu soo darsaday.
“Saaxiibadeyda waxay i yiraahdeen war aan Fariin u dirno. Isla markii ayuuna ka soo jawaabay.
“Intaa kaddib waxaan bilownay inaan wada hadalno ma garanayo sababta balse wuxuu i waydiiyay haddii aan la ciyaari karo Dos Anjos UFC 201.
“Intaa kaddib waxaan u diray sawir aniga ah oo garaacaya Dos Anjos (Nurmagomedov wuxuu ka adkaaday Dos Anjos 2014-kii.
“Ronaldo ayaa intaa kaddib ii soo diray .”
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee Faransiiska Noël Le Graët oo markale dharbaaxa xoogan la gaaray Benzema